कानुनी निकायहरूको परिसमापन: महत्वपूर्ण पक्षहरू
कानुनी व्यक्ति को परिसमापन के हो? बहिष्कार परिणाम जो यो प्रक्रिया हो, रजस्टर देखि एक विशेष संगठन बन्नेछ। किन यति धेरै कारोबार एक्लै तिनीहरूले व्यापार बाहिर जो मार्फत कानुनी निकाय निर्मूल गर्न सक्नुहुन्छ, र यस को लागि वकिल गर्न खोल्दै हुनुहुन्छ? तल लाइन को कुनै पनि प्रकारको छ उद्यमको परिसमापन थाहा निश्चित हो जो nuances, धेरै संग fraught छ। आफ्नो अध्ययन स्वतन्त्र सम्भव छ, तर व्यवसायीक गर्न उद्देश्य हासिल गर्न लागू गर्न धेरै सजिलो छ।
कानुनी निकायहरूको परिसमापन - एक लामो प्रक्रिया। जो एक निर्णय यसको शुरुवात बारे बनेको छ कारण, विभिन्न हुन सक्छ। त्यसैले व्यापार अप्रासंगिक भएको छ, र - केही अवस्थामा तिनीहरूले अरू असह्य ऋण उपस्थिति सम्बन्धित छन्।
सबै को पहिलो, हामी स्वेच्छाले मात्र बाहिर गर्न सकिँदैन, कि तर शक्ति द्वारा भन्नुपर्छ। नाम implies रूपमा, पहिलो मामला मा, संस्थापक तिनीहरूले यसलाई प्रतिबद्ध दोस्रो मामला मा, आफ्नो संगठन liquidate निर्णय। जो कानुनी निकाय liquidate गर्न आवश्यक हुन सक्छ? मात्र अदालत, कुनै एक यस्तो शक्ति अधिकार छैन।
धेरै प्रक्रियाहरु, सभा कागजात र यति मा को खण्ड सम्बन्धित कानुनी निकायहरूको परिसमापन। यो बैठक लेनदारों 'दावी समयमा ठाँउ लिन्छ कि सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण पनि छ। कारण जो यी आवश्यकताहरू पूरा? संगठन को बन्दोबस्त खाता बाट, साथै कम्पनी सम्पत्ति बिक्री पछि प्राप्त गरिने धन को खर्च मा धन को खर्च मा। मानिसहरू प्राप्त गर्न (यो क्रममा) आवश्यक के प्राप्त। यो चासो यी आवश्यकताहरू को सन्तुष्टि बारी मा बाहिर छ भन्ने छ। को संस्थापक कस्तो हुनेछ? मात्र कि ऋणदाता छोड्न छैन। लेनदारों बीच बाँकी सम्पत्ति वितरण अधिकृत राजधानी मा आफ्नो साझेदारी गर्न प्रत्यक्ष अनुपात मा बाहिर छ।
कानुनी निकायहरूको परिसमापन, नियम, कम्पनी धेरै ऋण छ मात्र ढिलाइ भएको छ। तिनीहरूले यति मा लेनदारों, तर कर र गैर-budgetary धन अघि मात्र हुन सक्दैन, र। तपाईं सबै भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्न भने, संगठन दिवालिया घोषणा हुन सक्छ।
कानुनी निकायहरूको परिसमापन: दिवालियापन
दिवालियापन पनि विफलता भनिन्छ। यहाँ सबै एकदम गाह्रो छ। अदालत मात्र होइन दिवालिया कम्पनी को पहिचान मा निर्णय, तर पनि परिसमापन समिति र लिक्विडेटर नियुक्त।
दिवालियापन सुविधा छ कि यो सबै सम्पत्ति कम्पनीहरु र केही पायो जो उधारदाताओं बेच्न हुनेछ पछि संस्थापक दाबी गर्न सक्षम हुने छैन छ। खैर, पछिल्लो व्यक्तिगत वित्तीय दायित्व मात्र सबैभन्दा असाधारण अवस्थामा हुनेछ।
Reorganization र कानुनी निकायहरूको परिसमापन
Reorganization अक्सर परिसमापन संग समीकृत छ। फरक के छ? तथ्यलाई यो ठाउँ उत्तराधिकारी लिन्छ कि जब। यसको प्रकारका छन्:
कानुनी निकायहरूको परिसमापन - सबैभन्दा जटिल प्रक्रिया।
लगातार सेवा - कति दिन? लगातार सेवा संरक्षण को अवस्था के हो?
राज्य को बजेट
OOO OOO को स्थापना मा निर्णय: आवश्यकताहरु
"स्टार वार्स" लूका Skywalker - अभिनेता पूर्ण आफ्नो भूमिका संग सामना
छोराछोरीको शिविरमा "सूर्योदय" (Anapa): समीक्षा, फोटो
बर्क ट्राफिक: लागू औषधि र न केवल